Sida loo furo loona rakibo faylasha APK kombiyuutarka | Androidsis
Manuel Ramirez | | APK, Codsiyada Android, Khiyaamada Android
Nasiib wanaag waxaan fursad u leenahay furo oo ku rakib faylasha APK kombiyuutarkaaga si aan ugu raaxeysano barnaamijyadeenna iyo cayaaraha aan jecel nahay. Sidan ayaan uga guuri karnaa shaashaddaas yar una guureynaa mid ka weyn sida midka PC-gaaga ama isla laptop-kan aan isaguba xunayn.
Sidaa darteed waxaan u soconaa baro qaar ka mid ah hababka aan haysanno si aan u soo jiidanno kombuyuutarradeena daqiiqado badan sidaasna ugu raaxeysto cayaarahaas shaashad ballaaran Oh, mana noqon doonto sida ugu adag ee ay noqon karto. Waxaan la tagnaa dhowr habab, ee taxaddar.
2 Sida loo rakibo APK oo leh Bluestacks
3 Ku xiridda Windows-ka taleefankaaga Microsoft iyo Samsung
4 Ku fur APK-yada Android Studio
5 Ku billow faylasha APK kombiyuutarka kombuyuutarka leh
Waa kan ikhtiyaarka ugu fiican ee aan hadda haysanno sababtoo ah fudeydkiisa iyo fudeydkiisa taas oo ah in lagu rakibo. Waa madal lafteeda lafteedu noo oggolaanaysa inaan furno oo rakibno faylasha APK si markaa aan marwalba uga helno codsiyadaas iyo ciyaaraha fiidiyowga ah.
Runtii waxa Bluestacks sameeyaa waa soo saar qalab Android ah oo daaha gadaashiisa ka socda si barnaamijyadan iyo ciyaaraha fiidiyowga loo bilaabi karo. Waxay la mid tahay haddii aan bilownay Android Studio, barnaamijka horumarinta barnaamijka Google, laakiin qaab quruxsan oo fudud oo aan loo baahnayn in aan galno faylal, iyo in ka badan.
Waxa ugu fiican ayaa ah tan tan Rakibaadda Android ee ku shaqeynaya asalka, Waxa kale oo ay ku dareysaa xaqiiqda ah inay leedahay Play Store lagu rakibay si aan u soo jiidan karno oo aan markaa u helno dhammaan barnaamijyada iyo ciyaaraha aan soo iibsannay. Dabcan, waxaan ka soo dhejin karnaa APKs emulator-kan sida aan hoos ku tusi doono.
Xaqiiqdii, waxaan korka ku lahaan doonnaa laba tab oo na geeya xarunta barnaamijyada iyo ciyaaraha, iyo tan labaad maxaa noqon doona ciyaaraha aan ku rakibnay kombuyuutarradeena, taasi waa, had iyo jeer waa inaan helnaa Bluestacks si aan u bilowno oo markaa aan awoodno inaan ciyaarno Mario Kart Tour.
Oo kani waa laga yaabaa Faa'iidada ugu weyn ee Bluestacks, maadaama ay naga hor istaagi doonto inaan ku jahwareerno APKs, si aan xitaa u raadin karno APK-ka la soo dejiyey oo aan uga fogaano inaan marinno habab kale oo dhib badan oo loo sameeyo, sida Android Studio.
Taasi waxay tiri, waa in la sheegaa in laga bilaabo codsi kombuyuutar macnaheedu yahay taas waxaan wajaheynaa barnaamij aan si aad ah loogu habeynin shaashadan cabirro waaweyn sida xakamaynta ama kontaroolada, sida jiirka.
Ugu dambeyntii, iyo inkasta oo Bluestack waxay umuuqataa inay na siiso khibrad fiican, Xaqiiqda ah in barnaamijyada la cusbooneysiiyay waxay u horseedi karaan khaladaad ku jira jawigan jilitaanka Android, markaa fiiro gaar ah u yeelo tan maxaa yeelay waxay kuu horseedi kartaa wadada qadhaadhka.
Waad awoodaa dooro inaad kala soo baxdo bilaash sida oo kale iyada oo loo marayo qaabka macaamiishooda.
Sida loo rakibo APK oo leh Bluestacks
Waxaan dooneynay inaan qeybtaan uga tagno qeyb lafteeda, waana taas Bluestacks sidoo kale waxay u oggolaaneysaa rakibidda APK-yada aan soo dejisannay markii hore laga soo qaaday boggaga sida apkmirror (mid ka mid ah kuwa aad loogu kalsoon yahay oo aan kugula talineyno markaad rabto inaad gasho APK gaar ah).
Taas marka la dhaho, waa wax fudud:
Waxaan bilownay Bluestacks kombiyuutarkayaga
Nos tag tabka "Barnaamijyadayda"
Laga soo bilaabo geeska daaqada Waxaan raadineynaa ikhtiyaarka «Ku rakib APK»
Waxaan raadineynaa feylka lagu marti geliyey kombuyuutarkeena oo rakibno.
Ku xiridda Windows-ka taleefankaaga Microsoft iyo Samsung
Samsung oo leh "Connect to Windows" iyo caawimaadda qiimaha badan ee Microsoft, waxay ku guuleysatay inay soo bandhigto barnaamijyada aan ku rakibnay moobilkeena PC-ga ama laptop-ka. Taasi waa, APK kasta oo aan gacanta ku rakibno mobiilkeena Samsung waxaa laga bilaabi karaa desktop-ka PC-ga.
Waxaan horey u haysanay uga faallooday qoraallo kala duwan dhammaan faa'iidooyinka ku xirnaanshaha Windows iyo barnaamijka Taleefankaaga ee Microsoft. Faa'iidooyinka ayaa badan, maxaa yeelay waxaan heli karnaa wicitaanno taleefan ama xitaa si dhakhso leh ayaan u gudbin karnaa feylasha markii aan isku xirnay labadeena qalab ama xitaa waxaad leedahay kabadh aad kuqorto oo aad ku dhajiso codsiyada min goob kale.
Runtii waan haysannaa kanaalkayaga 'Androidsis video channel' waa casharro maxay ku baraysaa sida loo furo barnaamijyada aad ku haysato mobiilkaaga kombiyuutarkaaga. Iyo tan ugu wanaagsan, cusbooneysiintii ugu dambeysay ee barnaamijkaaga Windows Phone, xitaa waad furi kartaa dhowr barnaamijyo isla waqti isku mid ah xitaa waad ku dhejin kartaa Windows taskbar.
Waxaan runtii wajaheynaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican, in kasta oo aan runti laga horrayn mid aan ka furan karno APK-yada Windows-kaTaabadalkeed, waa inaan tagnaa moobilkeena, oo aan kala soo baxnaa apk-ka oo aan rakibnaa si aan hadhow uga bilowno barnaamijkaaga taleefankaaga Windows.
Laakiin haddii aan raadino fudeyd iyo fudeyd, iyo waxaan leenahay Samsung mobile iyo waliba Windows PC, waan rakibi karnaa oo furi karnaa APK-yadaas, sidoo kale barnaamijyada iyo ciyaaraha aan ku rakibnay raaxada Windows-ka iyo Samsung khibraddiisa.
Markuu sidaa yidhi, runtii waxaan sameyn doonaa muraayadaha buuxa, ama muxuu noqon lahaa shaashad moobil qulqulaya, in kasta oo qaab muuqaal ah oo siinaya muuqaalka aan ku maareyno barnaamijka kombuyutarkayaga ama laptop-ka.
Ku fur APK-yada Android Studio
Waxaan u soconaa habka ugu dhib badan dhammaan, iyo waa sida saxda ah horumariye doonaya inuu abuuro ama wax ka beddelo barnaamijka uu isticmaali lahaa inaad ku abuurtay Android Studio. Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan barnaamijka 'Studio' ee 'Android Studio' ayaa ah inay u ekeysiinayso ama ku dayanayso aaladaha casriga ah nooc kasta oo Android ah. Waa inaan xitaa bilaabi karno nooc duug ah si aan u awoodno inaan bilowno APK-ka barnaamij ka mid ah barnaamijyada la taageeray, sidaas darteed waa khibrad dhammaystiran oo iskeed ah.
Kuwaas noqon lahaa tallaabooyinka ugu aasaasiga ah:
Waxaan rakibeynaa Studio-ka Android: Websaydhka Google
Waxaan ku rakibeynaa Android Studio kumbuyuutarka
Waxaan bilaabaynaa aalad dalwaddii ah si aan ugu dayanno
El APK aan soo dejisanay waxaan geynaynaa galka qalabka galka Android Studio SDK
Waxaan aadi lahayn galka uu ku yaal APK oo waxaan ku bilaabaynaa amarkaan xuquuqda maamulka amarka Windows:
adb rakib filename.apk
Halkee filename.apk wuxuu noqon lahaa magaca apk in aan dooneyno inaan ku darno liiska qalabka dalwaddii
El Naafada ugu weyn ee howlgalkaan waa inay weydo qodobo muhiim ah sida Adeegyada Google Play, markaa maahan inuu yahay barnaamij aad u fudud, maadaama aan raadineyno inaan bilowno APK ka mid ah codsiyada aadka loo jecel yahay, waxay nagu kici doontaa inaan ku dayanno khibradda. Istuudiyaha Android ayaa runtii loo sameeyay kuwa doonaya inay tijaabiyaan barnaamijyadooda ka hor inta aan lagu daabicin noocyada ugu dambeeya Play Store, laakiin habka tijaabada APK, dabcan waan awoodnaa.
Ku billow faylasha APK kombiyuutarka kombuyuutarka leh
Oo hadda waad yaabi doontaa haddii ay jirto si kasta oo aan loo jiidi karin emulator sida kuwa la xusay inuu awood u yeesho inuu furo faylasha APK. Haa way jirtaa waana iyada oo loo marayo kumbuyuutarka biraawsarka ee leh kordhinta noo oggolaan doonta inaan ku dhaqaaqno ficilkan.
Qalabkan waxaa abuuray horumariyeyaasha softiweer ee nidaamka hawlgalka Android. Marka waxay noo oggolaaneysaa iyada oo loo marayo Chrome-ka in aan ku dayanno APK-ka xitaa nidaamyada kale ee hawlgalka sida MacOS illaa iyo inta aan leenahay isla baare.
para awood u yeelan karto inaad bilowdo faylasha APK ee ku jira Chrome waa inaan hubino talaabooyinka soo socda:
Ku rakib biraawsarka Chrome oo tag ARC Welder: Kordhinta kordhinta
Waxaan ku darnaa ARC Welder-ka Chrome
Soo Degso APK kombiyuutarkayaga ama laptop-ka
Waxaan doorannaa kaniiniga ama mobilada aan dooneyno inaan ku soo bandhigno barnaamijka
Guji badhanka tijaabada si aad u hubiso in barnaamijku si fiican u shaqeynayo
Dhagsii «Daahfurka app»
Hadda waan awoodnaa ku bilow APK-ka kombuyuutarradeena sidaasna ku raaxeyso ama ku tijaabiso barnaamijkaas kumbuyuutarkayaga. Hadda waxaa kaliya oo aan dooraneynaa mid ka mid ah hababka la muujiyey ee sida aadka ah kuu xiiseynaya. Waxaan si furan ugu talineynaa Bluestacks sababtoo ah waxaan si fudud u soo dejineynaa, u rakibeynaa oo aan u galnaa koontadayada Google si aan ugu sii wadno rakibida APK ka yimid Dukaanka isku dhafan ee isku dhafan ama APK iyada oo loo marayo habka la sheegay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo furo loona rakibo faylasha APK kombiyuutarka